Ahoana ny fanapahana CD / DVD audio amin'ny Linux amin'ny Sound Juicer | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny famoahana CD / DVD audio amin'ny Linux amin'ny Sound Juicer
Amin'izao vanim-potoana izay miha lany andro izao ny fampiasana CD / DVD, nitombo ny fandraofana mozika, misy programa marobe afaka mamaky CD audio amin'ny Linux, saingy vitsy dia vitsy no tsotra toy ny Feon-kira.
1 Inona no atao hoe Sound Juicer?
2 Ahoana ny fametrahana Sound Juicer
2.1 Mametraka Sound Juicer amin'ny Ubuntu
2.2 Ampidiro ao Manjaro ny Sound Juicer
3 Ahoana no mihazakazaka Sound Juicer
4 Ahoana ny fomba hanamboarana CD mandrovitra amin'ny Sound Juicer
Inona no atao hoe Sound Juicer?
Feon-kira dia GUI eo aloha izay vita ao amin'ny GTK, izay ahafahan'ny mpampiasa mamoaka feo avy amin'ny CD ary mamadika azy ho endrika afaka averina navoakan'ny solosaina na fitaovana teknolojia isan-karazany. Mamela ny fangalarana codec audio izay tohanan'ny plugin GStreamer, mp3 (amin'ny alàlan'ny LAME), endrika Ogg Vorbis, FLAC ary PCM.
Feon-kira dia natao ho mora ampiasaina ary miasa amin'ny fidiran'ny mpampiasa kely. Ohatra, raha mifandray amin'ny Internet ny solosaina dia hanandrana haka azy avy hatrany ireo fampahalalana avy amin'ireo làlana maimaim-poana misy ao amin'ny MusicBrainz.
Feon-kira maimaim-poana sy loharano misokatra miankina amin'ny fepetra ao amin'ny GNU General Public Licence (GPL). Hatramin'ny andiany 2.10 dia ampahany ofisialy amin'ny tontolon'ny birao izy io GNOME.
Ahoana ny fametrahana Sound Juicer
Feon-kira Tsy apetrakao amin'ny alàlan'ny tsindry izy amin'ny fizarana maro ka mety ilaina ny mametraka avy amin'ny toeran'ny lozisialy fizarana. Atombohy amin'ny fanokafana ny manager software izay miaraka amin'ny fizarana anao.
Mitadiava "sound-juicer" ao amin'ny manager software.
Raha vantany vao hitanao ny programa mety, tsindrio fotsiny ny fametrahana mba hisintomana sy hametrahana ny kinova farany azo alaina avy amin'ireo tahiry.
Ny fonosana Sound-Juicer dia misy fanohanana default ho an'ny Vorbis sy endrika Flac. Ho an'ny fanohanana hafa dia tsy maintsy apetrakay:
gstreamer0.10-plugins-ratsy hanodinana ny MP2,
gstreamer0.10-mandringa hametaka ny MP3,
gstreamer0.10-plugins-tena-ratsy hanodinana ny AAC.
Mametraka Sound Juicer amin'ny Ubuntu
Ampidiro ao Manjaro ny Sound Juicer
yaourt -S sound-juicer
Ahoana no mihazakazaka Sound Juicer
Raha vao nametraka Feon-kira tsy maintsy mahita azy ao anaty menio isika. Ao amin'ny Linux Mint sy Ubuntu, Feon-kira aseho azy ho "Audio CD Extractor". Azontsika atao izany amin'ny Applications -> Feo sy horonan-tsary.
Raha tsy misy CD ao anaty kapila dia tsy manao na inona na inona ilay programa
Raha vao ampidirina CD audio, Feon-kira Mamaritra ho azy ny CD ary mamela anao hameno ny fampahalalana ho an'ny lohateny, mpanakanto, taona ary hanaraka ny mombamomba anao.
Feon-kira mifandray amin'ny MusicBrainz hamaritana ny mombamomba ny CD. Raha tsy hita ao anaty tahiry MusicBrainz ny CD dia hanana safidy ianao hameno ny fampahalalana CD amin'ny tanana ary handefa ny kapila ho an'ireo mpampiasa ho avy.
Ahoana ny fomba hanamboarana CD mandrovitra amin'ny Sound Juicer
Raha te hampiasa kapila CD hafa ianao dia ovao ny fampirimana mozika na ny anaran'ny mozika voaviravira, na ovao ny endrika mozika, kitiho ny Edit -> Prefers.
Kitiho ny "Edit Profiles" raha hanova ny toe-javatra mandroso momba ny fomba fitondra mozika. Misy piraofilina sasany apetrakao ao anaty toerana misy anao ary afaka manampy na manaisotra ny mombamomba anao ianao.
Asongadino ny iray amin'ireo mombamomba ary kitiho ny "Edit" hanovana ny anarana, ny famaritana ary ny fomba fihazakazahan'ny GStreamer hamoaka ny mozika.
Vantany vao tafapetraka ny zava-drehetra, kitiho ny "Extract" hanombohana mandrovitra ny CD.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ahoana ny famoahana CD / DVD audio amin'ny Linux amin'ny Sound Juicer
Mampiasa K3B aho ary tsy mila programa hafa handraisana CD mozika, K3B dia tena feno. 🙂
alejandro gallego dia hoy izy:
fonosana tsotra sy mahomby tena tsara misaotra betsaka, manao izay tokony hataony eo noho eo
Mamaly an'i alejandro gallego
Gabriel Antonio De Oro Berrío dia hoy izy:
Na dia mandany fotoana bebe kokoa amin'ny K3B aza ny fizotrany, dia tsara kokoa noho ny miaraka amin'ny Juice Sound. Napetrako tao amin'ny solosainako tamin'ny Deepin 20 Beta izany ary tsy nahafantatra ireo kapila CD, fa K3B kosa dia nanao izany avy hatrany. Midika izany fa ny Soun Juice dia tsy "mandaitra" araka ny voalaza.
Valiny tamin'i Gabriel Antonio De Oro Berrío